Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Kpụrụ ga-enyere ụmụ nwanyị na-anya ụgbọelu aka
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ ọhụrụ Papua New Guinea • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Captain Beverly Pakii abụrụla nwanyị mbụ na-anya ụgbọ elu na Air Niugini na Papua New Guinea ka ọ bụrụ onye isi ụgbọ elu ụgbọ elu mgbe ọ nwetasịrị iwu ya na ụgbọ elu Fokker Jet n'oge na-adịbeghị anya.
Site na mmeta a, ọ na - enyere Captain Pakii aka ịnọ na - achịkwa ma ọ bụ onye isi ụgbọ elu na netwọ ụgbọ elu nke Air Niugini nke Fokker 70 na Fokker 100 na-arụ ọrụ.
Flightgbọ elu azụmahịa mbụ ya bụ na Jenụwarị 4 nke afọ a n'ụgbọ elu Fokker 100, ụgbọ elu PX106 / 107 si Port Moresby gaa Lae na azụ. Onye ya na ya nọ n'ụgbọ elu bụ Onye Isi Mbụ Taylor Yama.
Onye isi ochichi Air Niugini, Simon Foo, na ekele Captain Pakii kwuru na ANG na etinye otutu ego na ihe ndi ozo n'inye ndi na-anya ugbo ala na ndi injinia kwa ubochi ma ihe dika nke a na-agba ume ma na-ekwe ndi nwanyi ndi ozo noo na usoro a agha. ịghọ ndị ọkwọ ụgbọ elu.
Ọ gara n'ihu kwuo na Air Niugini na-akwado nkwado nha anya nwoke na nwanyị n'ime ọrụ a na nnweta a tinyere ihe ndị ọzọ ụmụ nwanyị na-anya ụgbọelu na-arụ nke ụmụ nwoke na-achịkwa, na-egosi nkwenkwe ụgbọelu ahụ, nkwado na-aga n'ihu na itinye ego na ndị ọrụ nwanyị.
Maazị Foo kwuru, sị: “Captain Pakii abịawo site na sistemụ nwere ụkpụrụ dị oke elu n’oge niile. Nraranye ya, ntinye na ịdị obi umeala iji mezuo iwu ya gosipụtara na ndị ọkachamara ya na-eduzi n'akụkụ niile. Air Niugini na-ekele Captain Pakii maka ihe ọ rụzuru na nke a dị mkpa na ọrụ ya. Ọ bụụrụ ndị ọzọ na-achọ ịkwọ ụgbọelu ihe n modelomi. ”
Site na nne na nna agwakọtara agwakọta nke Enga na Morobe, ihe ndị Captain Pakii rụzuru n'oge gara aga gụnyere ịbụ nwanyị mbụ na-anya ụgbọelu nke akwadoro n'okpuru usoro ihe omume ndị Pilot cadet na 2004. Ọ bụkwa nwanyị nwanyị mbụ na-anya n'okpuru usoro a iji nweta iwu ya na Dash 8 ugbo elu ma rụọ ọrụ dị ka onyeisi ụgbọ mmiri na Machị 2, 2015. Na Mee 29, 2015 ọ mekwara akụkọ ihe mere eme ọzọ mgbe ọ bụ onye isi ndị ọrụ ụgbọ mmiri mbụ na ụlọ ọrụ enyemaka nke Air Niugini, Link PNG ụgbọ elu PX 900/901 si Port Moresby gaa Tabubil na azụ.
Captain Pakii ji obi umeala kweta itinye ego nke Air Niugini tinyere na ọrụ ya wee zie ndị na-anya ya ụgbọ elu na ndị na-anya ụgbọ elu nwanyị na-agba ume.
Pakii kwuru, sị "Kwerenụ n'ime onwe unu ma lekwasị anya n'ihe mgbaru ọsọ unu n'ihi na nsonaazụ na-akwụghachi ụgwọ."
Ọrụ Beverly dị ka onye na-anya ụgbọelu abụghị ihe ịtụnanya, nna ya bụ Captain Ted Pakii bụ onye bụbu onye ọkwọ ụgbọ elu Air Niugini bụ onye sonyeere ụgbọelu ahụ site na PNG Defense Force na 1994. Ọ rụrụ ọtụtụ ụdị ụgbọ elu n'oge ya, malite na Dash 7 wee pụọ mgbe ọ nwetachara. iwu ya na Boeing 767.